Hamiratra aty Afrika… | NewsMada
Hamiratra aty Afrika…
Par Taratra sur 21/11/2019
Fotoana izao ! Fanantenana vaovao indray ny nozarain’ny Barea ny talata teo. Samy velombolo avokoa ny rehetra, omaly, na tsy ampy torimaso noho ny niandrasana ny lalao sy ny fanehoana hafaliana taorian’izay aza. Tonga amin’izay ve ilay fotoana hampamiratra an’i Madagasikara aty Afrika?
Ny kitra aloha no malaza satria vao tsy ela akory ny “Can 2019”, nampisongadina sy nampalaza ny ekipam-pirenena malagasy. Mitohy aty amin’ny dingana voalohany amin’ny fandraisana anjara amin’ny “Can 2021” izany satria mahavelom-panantenana ny vokatra, hatreto.
Nahoana tokoa moa? Tsy efa an-dalan’ny fanatanterahana ve izany hoe ho sangany aty Afrika izany? Nofinofy natao ho tanjona, narahina ezaka sy paikady isan-karazany, izay misy ny fantatra ary maro kosa ny tsiambaratelo. Eny, azo tratrarina izany “Madagasikara, tompondakan’i Afrika” izany…
Tsy eo amin’ny kitra sy ny fanatanjahantena ihany fa eo amin’ny sehatra maro no tokony hamiratra aty Afrika i Madagasikara. Nodradraina hatramin’izay fa Nosy lehibe indrindra, niangaran’Andriamanitra tamin’ny toe-tany sy ny toetr’andro, manantombo amin’ny harena voajanahary i Madagasikara. Saingy…
Zava-dehibe loatra ireo ora vitsy nifanandrinan’ny Barea tamin’ireo ekipam-pirenena afrikanina hafa satria tamin’ireo fotoana ireo ihany no tena nahatsapana ny firaisankina sy firaisam-po amam-panahy eo amin’ny Malagasy. Vao nivadika ny andro, efa raikitra ny “rombo”, nohamafisin’ny vanim-potoan’ny fampielezankevitra rahateo.
Inona re ny paikady hafa, hamelomana sy hitazonana ny firaisankina toy ireny niseho nandritra ny lalaon’ny Barea ireny e? Ankoatra ny lalao manaraka, mazava ho azy…